Nokia မှ X6 စမတ်ဖုန်းစျေးနှုန်း ...
အစမိုဘိုင်းဖုန်းများစမတ်ဖုန်းများX6 Nokia ကစမတ်ဖုန်း
X6 Nokia ကစမတ်ဖုန်း
စျေးနှုန်းသမိုင်း Nokia က X6 4G phablet နိုင်ငံတကာဗားရှင်း
€ 225,43 - နိုဝင်ဘာလ 2019, 12
€ 186,39 - အောက်တိုဘာလ 2019, 12
€ 176,40 - ဇူလိုင်လ 2019, 16
€ 175,17 - ဇူလိုင်လ 2019, 1
€ 146,11 - ဇွန်လ 2019, 5
€ 137,52 - ဇွန်လ 2019, 3
€ 134,08 - မေလ 2019, 31
€ 146,11 - မေလ 2019, 30
မှ: 2019 30 မေလ
အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်း: € 225,43 - နိုဝင်ဘာလ 2019, 12
နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်း € 134,08 - မေလ 2019, 31
Nokia က X6 4G phablet နိုင်ငံတကာဗားရှင်း
Nokia က X6 စမတ်ဖုန်းနိုင်ငံတကာဗားရှင်း
Nokia ကဆဲလ်ဖုန်း X6 4G 4GB 64GB RAM ကို ROM ကို
Nokia က X6 5.8 လက်မ 4G စမတ်ဖုန်း (6GB 64GB5+ MP / MP Snapdragon 16 636 3060 mAh ဘက်ထရီ mAh ဘက်ထရီ)
Nokia က X6 5.8 လက်မ 4G စမတ်ဖုန်း (4GB 64GB5+ MP / MP Snapdragon 16 636 3060 mAh ဘက်ထရီ mAh ဘက်ထရီ)
Nokia က X6 လက်မ 5.8 19:9FHD မျက်နှာသော့ဖွအန်းဒရွိုက်တွင် Snapdragon 8.0GB 4GB 32 636 4G Octa Core စမတ်ဖုန်း
Nokia X6 Dual-နောက်ကင်မရာမျက်နှာသော့ဖွ 5.8 လက်မ 4GB 64GB Snapdragon 636 Octa Core 4G စမတ်ဖုန်း
Nokia က X6 ပထမဦးစွာထင်မြင်ချက်များ: အဆိုပါနယူးဘတ်ဂျက်ဆန့်ကျင်ဘက်?
Nokia က X6 လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ပထမဦးစွာထင်မြင်ချက်များ
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: X6 Nokia ကစမတ်ဖုန်း
Nokia ကစမတ်ဖုန်း X6 ဗီဒီယိုများ
အဘို့အ6ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း X6 Nokia ကစမတ်ဖုန်း
Lukcasfy - 2019 10 ဇွန်
ငါ DHL မှတဆင့်ယနေ့ဖုန်းလက်ခံရရှိတဲ့။ ဒါဟာအမိန့်ကနေလက်ခံရရှိသည်အထိတစ်ဦးအမြန်ဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ အထုပ်ပျက်စီးမခံခဲ့ရပါဘူး။ ပထမဦးဆုံးထိတွေ့နဲ့ကြည့်အတွက် configuration လွယ်ကူသောကြီးကအရမ်းအထင်ကြီးခဲ့ပါတယ်။ ငါယခုတိုင်အောင်မဆိုအနုတ်လက္ခဏာဟုမဆိုနိုငျသညျ, ငါကင်မရာ features တွေနှင့် display ကိုကြိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိဤမျှကောင်းသော! 🙂
Xiaomi က MI A1 ဖုန်းမှ (4GB RAM ကို, ROM ကို 64GB, 5.5 လက်မ)